नयाँ Xperia C5 अल्ट्रा र Xperia M5 उनीहरूको प्रस्तुतीकरण अघि फिल्टर गरिएको छ Androidsis
सोनी दुई नयाँ टर्मिनलहरूको प्रस्तुतीकरण क्यान्डीमा गइरहेको छ जुन बजारमा हालको उपकरणहरूको मध्य-दायरा सूची विस्तार गर्दछ। यी नयाँ उपकरणहरू, को नाम अन्तर्गत सोनी Xperia C5 अल्ट्रा y Xperia M5 तिनीहरू यसको प्रस्तुतीकरणको केही घण्टा अघि चुहाएको छ कि, यदि सबै योजना अनुसार चले भने, यो अर्को3अगस्ट हुनेछ।
चुहावट इन्टरनेट पोर्टल GSMArena द्वारा प्राप्त भएको थियो, प्रारम्भिक पोष्ट जहाँबाट यी सोनी टर्मिनलहरू फिल्टर गरिएको थियो, मेटाइएको छ, केवल केही छविहरू र विशिष्टताहरू छोडिदै। दुबै एक्सपेरिया सी Ul अल्ट्रा र एक्सपेरिया एम two दुई टर्मिनलहरू हुन् जुन बजारको मध्य-दायरामा हुनेछन्, यद्यपि तिनीहरू पूर्ण रूपमा उच्च श्रेणीमा पनि हुन सक्दछन्।
1 सोनी Xperia C5 अल्ट्रा
2 सोनी एक्सपरिया एमएक्सएनएमएक्स
सोनी Xperia C5 अल्ट्रा
भविष्यको टर्मिनलले उपकरणको अगाडिको भाग खडा गर्दछ किनकि यसले व्यावहारिक रूपमा कुनै साइड बेजेलहरू लिदैन। मात्र १२ मिलिमिटर तिनीहरू उपकरण र स्क्रिनको बिच्छेदको कारण हुन्, जुन उपकरणको अगाडि केवल पर्दा मात्र देखिन्छ। यसको अगाडिको भागसँगै, हामी फेला पार्दछौं कि टर्मिनलमाaछ १.6..XNUMX इन्च स्क्रीन र FullHD रिजोलुसनको साथ।
स्मार्टफोनको अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टताको बारेमा हामी कसरी हेर्छौं यसको दुई क्यामेरा १ 13 मेगापिक्सलको हुनेछ र एलईडी फ्ल्यास हुनेछ। भित्र, प्रोसेसर मिडियाटेक MT6752 उपकरण सार्ने क्रममा हुनेछ जुन सँगै २ जीबी र्याम मेमोरीको साथ, उपकरणले धेरै सजिलैसँग सार्नेछ। तपाईंको आन्तरिक भण्डारण हुनेछ 16 जीबी यसलाई माइक्रोएसडी स्लट मार्फत विस्तार गर्ने सम्भावनाको साथ।
ठुलो टर्मिनल हुनाले, निर्माताले ठूलो क्षमताको ब्याट्री चढ्नको लागि यो सामान्य छ, त्यसैले Xperia C5 अल्ट्रा हुनेछ 2.930 mAh यसले टर्मिनललाई सामान्य प्रयोगमा स्वायत्तताको दिन भन्दा बढी बनाउँछ। हामीलाई आयामहरू थाहा छैन तर हामीलाई यसको वजन थाहा छ, जुन १187 ग्राम हुनेछ। यसको अंशको लागि, यो आशा गरिन्छ कि यो उपकरण वरिपरि बिक्रीमा जान्छ 350 डलर.
सोनी एक्सपरिया एमएक्सएनएमएक्स
दोस्रो टर्मिनल जुन सोनीले अगस्त3मा प्रस्तुत गर्ने छ Xperia M5 हो। यो उपकरणको प्रदर्शन हुनेछ5इन्च र FullHD रिजोलुसनको साथ। भित्र हामी फेरि कसरी हेर्दछौं, MediaTek यो स्मार्टफोनको SoC सुसज्जित गर्न को लागी हुनेछ, विशेष गरी हामी कुरा गरिरहेको हुनेछ Helio X10। यस प्रोसेसरको साथ हामी यो देख्छौं कि सोनीले उपकरणले कसरी सुसज्जित पार्दछ3GB को RAM. यसको आन्तरिक भण्डारण पनि १ GB जीबी हुनेछ र एक्सपेरिया सी Ul अल्ट्रा जस्ता यसलाई माइक्रोएसडी कार्ड प्रयोग गरेर विस्तार गर्न सकिन्छ।
यसको क्यामेराको बारेमा, हामी हेर्दछौं कि त्यहाँ कसरी C5 अल्ट्राको सम्बन्धमा ठूलो भिन्नता छ र त्यो यो हो, यसको मुख्य क्यामेरामा सेन्सर हुनेछ। २१..230 MP IMX21 र फ्रन्टको एपर्चरf/ २.२। यसको अंशको लागि, फ्रन्ट क्यामेरा १ MP MP र फ्ल्यास बिना नै हुनेछ। यस उपकरणसँग आईपी certific2.2 प्रमाणीकरण हुनेछ, धुल र पानीका लागि अधिकतम र यसको मूल्य यसको वरिपरि हुन सक्छ 400 डलर.
हामीले सोनीको नयाँ टर्मिनलहरू प्रस्तुत गर्न केही घण्टा कुर्नुपर्नेछ र तिनीहरूको विशिष्टता, उपलब्धता र सुरुवात मूल्यको बारेमा शंकाहरू छोड्नेछौं। र तपाइँलाई, तपाइँ यी नयाँ सोनी मोडेलहरूको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » नयाँ Xperia C5 अल्ट्रा र Xperia M5 तिनीहरूको प्रस्तुतीकरण अघि फिल्टर गरीन्छ
फ्रेडीको at मा पाँच रातको साथ आतंक फिर्ता